Ọkụ nke Aluminom Na-agbaze Ọkụ nke Nwere Ntube maka Alaminium Scraps, Ingot
Home / Ọkụ na-ekpo ọkụ / Ogbugba oku nke alumini / Aluminom Ingots Agbaze Ọkụ na Induction
Ọkụ nke Aluminom na-agbaze ikpo ọkụ na nkwụsị
Categories: Ogbugba oku nke alumini, Ọkụ na-ekpo ọkụ, Ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ Tags: aluminum ingots melting, aluminom enots melting furnace, aluminum ingots melting furnace price, aluminum ingots melting machine, aluminum ingots melting oven, ịzụta aluminum ingots melting furnace, electric electric ingots melting, induzi aluminum aluminom melting, agbaze aluminum ingots, agbaze aluminum ingots ọkụ
Elu 200 ^ 1200kg electric Aluminium Ingots Na-agbaze ọkụ na ntinye maka nkedo na agbaze akụrụngwa aluminom, scraps, ihe ndị a na-emepụta, ọkụ eletriki ingots induction smelter, ọkụ ọkụ ọkụ induction ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ eletrik melite.
Onye ọrụ ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ na-agba ọkụ ga-etinye akụkụ nke aluminom ma ọ bụ aluminom ingot / wepụ dị ka ụgwọ na ọkụ ọkụ ọkụ na-agbazi ọkụ ọkụ na-amalite melite ọkụ iji malite usoro ịgbaze. Ịgbakwunye aluminom ndị ọzọ na-akwado usoro a bụ ihe amamihe dịka aluminom a na-enwupụta nke na-eme ka okpomọkụ dịkwuo mma.
Mgbe okpomọkụ nke aluminom ruru 1220.66 Celsius F ọ na-agbanwe na mmiri mmiri. Onye ọ bụla fọdụrụ na mkpuchi na agba si na akpa ga-efe n'elu n'elu. A na-akpọ ihe a na-emepụta ụrọ ma nwee ike ịmịnye ya na nchara ígwè. Nke a kwesịrị ịdị jụụ tupu enwee ike iwepụ ya n'enweghị nsogbu.
Ọzọ, ọkụ (ọkụ) ga-awụpụ ala dị ọcha. A na - ejikarị emepụta mmanụ ụgbọ mmiri na - agbanye iji wụnye nnukwu mmiri mmiri.
N'ikpeazụ, iji nlezianya, a ga-awụnye aluminom a wụrụ awụ ka ọ bụrụ ihe dị jụụ ma kpochaa maka iji ya.
Autịp nke electric aluminom ingots na-agbaze ọkụ:
1, chekwaa ume ma belata ọnọdụ gburugburu ebe obibi
Ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ nke mbụ na-ekpo ọkụ na mmetọ, ma na-enyekwa aka na-ekpochapụ pipeline, n'ime na n'èzí ọkụ ọkụ nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nkesa na ogbako ahụ, na-eme ka ebe obibi dị elu dị elu. Nke a bụ ọnọdụ ọkụ ọkụ nke mbụ, ọtụtụ ndị na-agafe na ikuku, enwere mgbapụta okpomọkụ, mmepụta nnukwu ike oriri, na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke mmepụtawanye. N'otu oge ahụ, ọnọdụ okpomọkụ na-aba ụba. Nhọrọ electromagnetic induction usoro mgbochi, ihe mmepe ahụ bụ site na ikpo ọkụ nke magnet, iji belata mmefu nke ikpo ọkụ, kpo ọkụ ọkụ, agbaze ngwa ngwa, si otú a belata ume ike. Belata ikike eletrik. Mgbe nyocha nke ule nyocha na mgbanwe, ike nzọpụta bụ 20% -40%.
2, ngwangwa ọkụ ọkụ, njikwa na-achịkwa ezigbo oge
Igwe mmepụta nke electromagnetic usoro sitere na ntinye uzo magneti na-eme ka oku kpo oku ngwa ngwa, ihe ngbachapu nke oma Aluminom Alloy. Njikwa okpomọkụ bụ oge dị mma na nke ziri ezi, nke na-eme ka àgwà ngwaahịa ahụ dịkwuo mma ma mezie mmepụta arụmọrụ!
3 na ndụ ogologo ndụ, nhazi dị mfe
Egwuregwu ọkụ na-agbaze ọkụ eletrik na-agbaze ọkụ ọkụ bụ iji kpo ọkụ ọkụ na-eguzogide, waya na-eguzogide na ebe dị elu na-ekpo ọkụ ruo ogologo oge n'iji oxydation eme ihe ga-eme ka ibelata ọrụ ndụ ya, ụgwọ ọrụ dị elu. A na-emepụta ihe mkpuchi electromagnetic electromagnetic na ihe dị ọkụ na ntanetị dị elu, yabụ ndụ ogologo oge na-enweghị ihe ọ bụla.
Mmetụta mmepụta ígwè nke ikuku ọkụ na mmepe na ntozuzu nke teknụzụ, usoro mmepụta na nkà na ụzụ nke components, ngwanrọ, dịka nchekwa nchebe nke ike ugbu a nwere ike ịbụ 2-200KW.
Ụdị ihe eji emepụta emetụ emetụ ọkụ ọkụ, nke nwere ike belata okpomọkụ nke igwe ahụ, na ahụ mmadụ nwere ike imetụ aka n'enweghị nsogbu ọ bụla, iji zere ihe ọkụkụ na ihe mberede na-esi n'aka omenala ọkụ ọkụ na-echebe nchekwa nchekwa nke ndị ọrụ.
Nchekwa ike 1 na nchedo gburugburu ebe obibi, ngwaọrụ ike IGBT nke Germany, ntụkwasị obi dị elu, ọrụ siri ike na ụgwọ mmezi dị ala.
2) ugboro ole na-arụ ọrụ nke dijitalụ ekpochilachi nsụgharị akaghị, imeda ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ike 3 na-ejigide njikwa-akara, iji zere mgbanwe okpomọkụ nke ike na-akpata.
4) n'elu voltaji, n'okpuru voltaji, enweghị nke oge, karịa ugbu a, n'elu nchebe ọkụ, ngosipụta oge n'ezie nke ọnụọgụ abụọ, nchọpụta nchọta na mkpu; nwuo mkpuchi akpaka, gbanyụọ ike ọkụ na ọnọdụ ọrụ nke ngosi ngosi oge.
5) PID usoro nchịkwa ọkụ, ikpo ọkụ kpo ọkụ, gbochie ihe ọkụkụ na-ere ọkụ na-ere ọkụ, na-ere ọkụ, ihe dị iche iche dị iche iche dị mma iji meziwanye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ.
6 (LED) nhazi igwe okpomọkụ, nkwụsị na ịchịkwa oke okpomọkụ nke ziri ezi ruo na 3 ogo ogo, àgwà nke ofe aluminom dị mma, okpomọkụ na-agbaze ngwa ngwa, ọkụ ọkụ dị mfe ịchịkwa, arụpụta mmepụta dị elu;
7) usoro ihe owuwu nke ọkụ ọkụ ọkụ, obere olu, ihe ọma ikpuchi ihe, ike dị ala, arụmọrụ dị elu, okpomọkụ dị elu karịa ogo 1200, ndụ ogologo oge;
8. Ọrụ ahụ dị mfe ma nwee ike ịgbanwe ọrụ ahụ;
9 (100%) kwado oge, ike kachasị elu, iji hụ na ọrụ 24 ga-arụ ọrụ.
Ike ikpo ọkụ nke SMJD usoro ọkụ eletrik aluminom melting furnace:
ụdị ọsọ ọsọ Power Ike ikpochapu Okpomọkụ Max
ígwè, igwe anaghị agba nchara ọla kọpa, ọlaedo, ọlaọcha (scrap, Slag) aluminum, alloy alloy,
Aluminum scrap, Aluminom slag, pop ike
Usoro ihe na-eme ka mmiri gbanwee usoro ihe ọkụkụ
Aluminom, ọla kọpa, Ígwè nkwụsị na-agbaze ọkụ oku
Ọkụ ọkụ na-acha edo edo nke ere ere
ụlọ ọrụ na-agbaze ọkụ ọkụ ọkụ aluminium • IGBT injin aluminum smelter
Ọkụ Egwú Na-agbaze Ọkụ